Bongolava: potiky ny bibikely ny tanin-katsaka 5 000 ha | NewsMada
Bongolava: potiky ny bibikely ny tanin-katsaka 5 000 ha
Nambaran’ny talem-paritry ny Fambolena sy ny fiompiana (DRAE) any Bongolava fa mahatratra 15 000 ha ny velaran-tany ambolena katsaka any an-toerana. Tratry ny bibintsaonjo manapotika azy ny 5 000 ha amin’ireo. Tonga tany Antsampanimahazo, 3 km miala an’i Tsiroanomandidy, faritra Bongolava, ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (MAEP), Ranarivelo Lucien, ny talata teo, nisantatra ny hetsika hiadiana amin’ity bibikely ity. Araka ireo teknisianina, mila mampiasa fanafody simika nahazo fankatoavana ny famonoana ireo bibikely. Miara-miasa amin’ny MAEP ny Ivontoerana famonoana ny valala (IFVM).
Mampiasa fanafody simika
Nanatrika teo koa ny mpamboly ka nilaza i Martin fa tonga ara-potoana izao finiavan’ny fanjakana izao. Efa very fanantenana ny tantsaha satria lany haiky tsy nahita vahaolana mikasika ity bibintsaonjo manapotika ny katsaka ity.
Nambaran’ny minisitra fa tafiditra ao anatin’ny velirano fahasivin’ny filoham-pirenena Rajoelina ny fahavitan-tena amin’ny sakafo, ny fampiakarana ny voka-bary, ny fampiroboroboana ny fiompiana ary ny famokarana hazandrano. Eo koa ny fanohanana ny tantsaha hanatsarana ny famokarana isam-paritra.
Mizara telo ny dingana hamongorana ny bibintsaonjo manimba ny katsaka. Ny dingana vonjitaitra, ny eo antenantenany ary ny dingana maharitra. Mandritra ny telo taona ny hetsika.